Daadka barafka: astaamaha, qaabeynta, noocyada iyo khataraha | Saadaasha Shabakadda
Baraf baraf ah
Xaqiiqdii waligaa waad maqashay a Baraf baraf ah. Waa baraf xoog badan oo si lama filaan ah u dhaca. Waxay isku dari kartaa labada soodhadh iyo alaabba iyadoo qayb ka ah dhulka adag iyo dhirta. Dad badan ayaan si fiican u aqoon waxa laga yeelayo qulqulka barafka iyo sida uu u bilaabmay.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha, asalka iyo ficilka ee ku wajahan baraf badan.
2 Kala soocida barafka barafka
3 Samaynta baraf baraf ah
4 Waxa la sameeyo
Waa xayndaab weyn oo baraf ah, oo aakhirka ku dumiya buuraha sababo laxiriira baraf. Waa jiirada iyo barafka isku wada keenaa roobabka culeyska barafkiisa. Ha iloobin in culeysku had iyo jeer sameeyo waxkiisa oo uu u jiido barafka oo dhan meesha ugu hooseysa.
Astaamaha ugu waaweyn ee qulqulka qulqulka waa socodka degdega ah iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqa. Ha ahaadaan daadad dhagaxyo ah, dhoobo, baraf iyo baraf, iwm. Markaan tixraacno qulqulka dhagaxa weyn, waa koox dhagxaanta ah oo ka mid ah meelo dhaadheer oo jiilaalka jirka, kiimikada awgeed, aakhirka jabiya oo degta culeys awgeed.
Dad badan, tani waa mid ka mid ah dhacdooyinka dabiiciga ah ee ugu cajaa'ibka badan, laakiin sidoo kale aad ayey khatar u tahay. Qaar badan oo skiers ah waxay u dhaqaaqi karaan hoos iyagoo wata xawaare aad u weyn iyo dabacsanaan. Si kastaba ha noqotee, qulqulaya ayaa si dhakhso leh u dhacaya.
Haddii tirada barafka aysan degganeyn oo ay ku samaysato jaranjaroolo, xawaarihiisu wuu kordhayaa iyada oo jooggeedu hoos u dhacayo kolba markuu soo degayo. Qaylada ay soo saarto waa mid aad u weyn oo ka soo yeera buuraha kale. Markay ugu dambayn degto gunta hoos udhaca, waxay soo saartaa qadar farabadan oo daruuro walxaha barafka saameeya ah. Qaybahaas barafka ah ayaa aakhirkii hawada ku kala firdhiya oo dhalaalaya.
Kala soocida barafka barafka
Duufaannada ayaa dhaca marka lakabyada kala duwan ee barafka aan sinnayn, taas oo u sahlaysa hal lakab inuu ku dul wareego ama ku dul durko mid kale. Guud ahaan, had iyo jeer waxay ku dhacaan sababo kiciyaal gaar ah, kuwaas oo aan ka dheehan karno: dhulka, dabaysha, roobka, isbedelka heerkulka, xaaladaha barafka, qaabka iyo qallafsanaanta dhulka, doogga jira iyo dadka u gaar ah.
Sidoo kale, darnaanta dhacdadu waxay xiriir dhow la leedahay jiirada, dusha kala-goynta, iyo heerka uu ka soo jeedo jiirada. Marka laga hadlayo kala soociddooda, guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 3 nooc.
Dhaxan baraf badan: waa kuwa dhaca dhacdooyinka ka dambeeya dhacdooyinka baraf xoog leh oo joogto ah. Waxay u muuqdaan inay urursadaan dhowr sentimitir oo baraf cusub ah waxayna keentaa in walxaha kristantiga barafka aysan helin waqti ku filan oo ay ku awoodaan inay si xoog leh iskula jaan qaadaan oo ay u dhacaan. Sidaa darteed, waxay bilaabaan inay di'i karaan maaddaama daboolka barafka uu yahay mid aan degganeyn.
Baraf saxan- Waxay dhacdaa iyadoo loo sifeynayo lakab adag oo cufan. Siibiddani waxay ku dhacaysaa lakab kale oo aad u da ’weyn oo baraf ah oo u dhaqma sidii wax shil galaya maaddaama oo uusan lahayn isku xirnaanta labada weji. Caadi ahaan waxay ku dhacdaa culeysyo badan awgood iyo gaar ahaan meelaha dhaadheer ee u dhexeeya 25-45 digrii.
Daadadka Meltdown: waa tan ugu caansan ee dhacda sanadkiiba. Waxay caan ku yihiin xilliga gu'ga waxayna ku saabsan tahay barakicinta barafka qoyan ee aan lahayn isku xirnaan. Waxay ka imaan karaan qulqulatooyin yar yar oo maxalli ah oo muhiimad yar u leh baraf waaweyn. Waxaa loo soo saaraa iyada oo ay ugu wacan tahay kor u kaca heerkulka si tartiib tartiib ah inta lagu jiro guga iyo marka uu dhaafo 0 darajo lakabka koowaad wuxuu bilaabmaa inuu dhalaaliyo. Shalay inuu dhalaaliyo wuxuu sababa daadadka lakabyada hoose wuxuuna bilaabaa inuu kordhiyo xasilloonida dhulka. Sidaa darteed, waxay ku dambeeyaan daadinta ugu badnaan culeyska. Haddii biyaha dhalaalaya ay gaaraan lakabyada hoose, waxay soo saari karaan filim duufaan ah oo sababa qulqulatooyin hoose. Daadkan hoose waa wax aan ka badnayn bustaha barafka oo dhan oo hoos u sii dhacaya.
Samaynta baraf baraf ah
Culeyska barafku wuxuu qiyaastii yahay hal milyan oo tan. Qiyaas inaad adigu si deggan u barafleyso, kuna raaxeysaneysid quruxda iyo xawaaraha sare ee adrenaline, oo waxaad is aragtaa iyadoo lagu eryanayo milyan tan oo baraf ah. Natiijadu waa mid xun. Inbadan oo kamid ah barafleydii uu saameeyay barafku waxay ku aasnaayeen dhexdeeda.
Sidoo kale, kuma dhamaan doontid oo keliya inaad dhimato maxaa yeelay waa lagu aasay, laakiin waa inaad sidoo kale maskaxda ku haysaa in malaayiin tan ay barafoobeen oo aad qabtid hypothermia. Laakiin maxaa keena qulqulka? Si ay dhacdo noocan oo kale oo daran u dhacdo, baraf badan ayaa loo baahan yahay. Baraf ka daloola buuraha ayaa ah waxa ugu fiican ee kiciya dhul go'idda.
Badanaa waxay ku samaystaan ​​dhaadhacyada xaglo dhaadheer oo u dhexeeya 25 iyo 60 digrii. Xaaladdan oo kale, marka barafka la keydiyo, waxaa lagu ridi karaa cuf isjiidadka. Laakiin samaysmada qulqulka baraaruhu wuxuu u baahan yahay qodob kale, taas oo ah, in uu jiro duufaan baraf ah oo keydin kara ilaa 30 cm oo baraf ah lakabka sare muddo gaaban. Barafka waa in la keydsadaa ugu yaraan 24 saacadood si loogu oggolaado in ay kula degto miisaanka kordhay iyada oo loo marayo isugeyn.
Xiriirka ka dhexeeya lakabyada barafka waa inuu daciif ahaadaa si ay u noqdaan kuwo aan degganeyn. Caadi ahaan, marka barafku si aad ah u badan yahay, waxaa jira lakab ka xasillooni badan. Isbedelka cimilada ee lama filaanka ah ee aagga ayaa ah waxa kiciya qulqulka barafka. Waxay kaloo noqon kartaa geed dhacay, dhulgariir yar, ama buuq xad dhaaf ah, sida suuq ama kuhadal.
Aan aragno qaar ka mid ah xeerarka si aan u baranno sida loola macaamilo barafka barafka:
Marka dadka badani bilaabaan inay dabcaan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka saartid ulaha barafka maadaama ay sababi karaan dhaawac aad u badan.
Waa inaad isku daydaa inaad ka baxdo dariiqa qulqulka xilli dambe
Haddii aad dhacday oo lagu jiiday, iskuday in aad dusha sare joogtid qiima kasta ha lahaadee u dhaqaajinta gacmaha sidii aad u dabaalan jirtay.
Markuu barafku yaraado, waa inaad afkaaga iyo sankaaga ku dabooshaa gacmahaaga si aad u samaysato god kuu oggolaanaya inaad neefsato.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto barafka barafka wata iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Baraf baraf ah